Sisuka kude noLindisa sibambene kuze kube manje - Bayede News
by nguBongani Mavuso
UMavuso ngumethuli wezindaba emsakazweni Ukhozi FM, imbongi nombhali wamabhuku ehlukene
Sengigabavule ngamehlo engqondo ngicabanga ngobunzima esihlangabezane nabo ngokulahlekelwa ngenye yamadodana ezwenikazi i-Afrika uDkt uJohn Thulani Mbuli. ULindisa udlule emhlabeni esikhathini lapho ngisezinhlungwini esibhedlela emva kokuxinwa yisifo sezinso ezifinyelele esigabeni sokugcina, okungesesi-5.
Ngithe lapho ngilele embhedeni wesibhedlela ngibhekene nezinhlungu ezingapheli ngiqhathanisa futhi ngizibuza ukuthi ingabe emva kwesikhathi esingaka ngisebenza kanzima ngivuselela ukunotha kolimi, umlando namagugu iyona ndlela okufanele ngibongwe ngayo nguMvelinqangi.
Lokhu bekuhambisana nomsebenzi omkhulu ongisalele engingakawuphothuli engingathi ngawuqala kusuka phansi lo nyaka emva kokwethula inhlangano esebenza ngaphandle kokubheka inzuzo iBongani Mavuso Foundation ngaxhumana noMbuli owavumela phezulu ukuba yingxenye yawo.
Siqale ukusebenza noMbuli ngaphansi komjikelezo wokuhambela izikhungo zemfundo ephakeme lapho besiqhakambisa futhi sigqugquzela khona ukuhlonishwa kwemibhalo yababhali abangasekho abanjengoDkt uBW Vilakazi, uSolwazi uSibusiso Nyembezi, uDkt uPixley Ka Isaka Seme.
Empeleni ngingakusho ukuthi uLindisa ube yisikhulumi sokugcina esinohlonze ohlelweni esilusingathe esikhungweni semfundo esiqeqesha ngokwamakhono Umfolozi TVET College eSikhaleni ngoNdasa.
Inkulumo yakhe yabe igxile kakhulu kumbhali ohlonishwayo uDkt uBW Vilakazi ocabe indlela ekulotshweni nasekuthuthukisweni kwezincwadi zesiZulu. Inkulumo yakhe yathanda ukujiya nokwakufakazelwa ugqozi olwalubonkala emakhulwini ngamakhulu abafundi ababethamele uhlelo ekolishi.
Abukho ubuhlungu obenza isimo engihlangabezane naso lapho ngithola umyalezo ebusuku ovela kusoDolobha waseDumbe uMnu uMajuba Mavuso engazisa ngokuxineka kukaLindisa ngesifo esifana naleso esabe singifake egunjini labagula kakhulu esibhedlela. Ngathatha isinyathelo sokuqala sokuxhumana naye kodwa ngangaphumelela ukumthola kodwa ngaba nethemba lokuthi akukubi kangako.
Kwenzeka konke lokhu izinhlelo esizibeke noLindisa zokuvuselela isithunzi sikaMntwana uMkabayi KaJama odlinza lakhe liseDumbe lapho sidabuka khona laliqhubeka nokulokoza. Kanti nemibhalo emayelana nokuthuthukiswa kolimi lwesiZulu sasivumelene ukuthi uzonginika ngeviki esibheke kulo ngiqhubeke nokuyishicilela.
ULindisa wenze okuningi ekuthuthukiseni ulimi lwesiZulu kodwa kuncane okushicilelwe ngenhloso yokuba kuhlomuhle izizukulwane ngezizukulwane. Kungaleso sizathu lapho engamthinta khona ngimnxenxa ukuba ahlunge eshungwini lakhe eminye yemisebenzi esingayishicilela.
Ugqozi nentshisekelo yokusebenza ngokuzikhandla kukaLindisa kwangihlaba umxhwele ngibona amava akhe enyuvesi yakwaZulu sisengabafundi ngeminyaka yawo-1995. Emva kokwemukelwa yiNyuvesi yakwaZulu njengomfundi akazange avumele isimo sempilo nendabuko yakhe ukuba kumkhinyabeze ekuqhakambiseni ubuyena njengoMzulu.
Wawumuzwa ekuxoxeni kwethu naye njengabafundi ababephokophele impumelelo ukuthi ukuba kwakhe kwaNgqondonkulu kufeze iphupho lakhe lokuba nesandla emzabalazweni wovuselela isithunzi sendlu ensundu esikhathini lapho sasisanda kuthola khona umbuso wedemokhrasi.
Ngingathi ndlelanhle mfo kaLindisa! Ngizothanda ukukutusa kukho konke ukusebenza kwakho ngokuzikhandla ukusukela eNyuvesi yakwaZulu njengothisha nebamba lenhloko yoMnyango wesiZulu, uthishanhloko wekolishi lezisebenzi, uSihlalo kaMzukazwe okuyibhodi elibhekele ulimi lwesiZulu kuzwelonke, ilungu eliqavile lebhodi elilawula izilimo kuleli iPANSalb, umkhandlu wamagugu kazwelonke iNational Heritage Council nomsakazo Ukhozi FM.
Sengathi amakhehla nezalukazi zakoLindisa bangaqhubeka nokuseboleka ubuhlakani bakho njengoba umphefumulo wakho uzohlale unathi. Sizoqhubeka ngaphandle kokudikibala nomsebenzi esiwunikwe yidlozi wokuba sivuselele okwakithi ngaphandle kokuhloniza.
Nina beNdlovu enamandla ngizothanda ukubonga kakhulu ngokuba nothando lwezinto zesintu olwenza kube lula ukuxhumana kwethu njengabendlu ensundu. Ngaphandle kothando enginalo ngolimi lwesiZulu ngangingekwazi ukuxhumana nokwazana noLindisa ngendlela ebesixhumana futhi sazana ngayo.
Ukuzigqaja kwethu ngokwakithi kusenze saphenduka izelamani njengoba bengihlale njalo ngithekela ulwazi kuye uma seziyime emthumeni lapho ngibhala izinkondlo. Sengathi iSilo samaBandla onke singaduduzeka njengoba silahlekelwe ngesinye sezifundiswa zakithi ezibe negalelo elikhulu ekuthuthukiseni ulimi lwesiZulu.
Emndeni kaLindisa ngiyawunxusela ukuba amathongo aqhubeke njalo nokuwuvikela futhi atshale imbewu yokuvikeleka kwawo esikhathini esinzima umndeni obhekene naso. Njengomsakazo Ukhozi FM, sigqemeke engeqiwa ntwala kwazise phela sisebenzisane naye njengomhlaziyi kusukela ngowezi-2006 ngaphandle kokudikibala.
Ngingalikhipha ngesihloko elithi okumenze waba nedumela kakhulu ezinhlelweni engizishayelayo zezindaba ukukhuluma ngaphandle kokuncetheza nokunabukelisa lapho ezwakalisa khona imibono yakhe ethe ukujiya.
Ndlolothi edliwayo njengamabele.
nguBongani Mavuso Jul 17, 2020